Maitiro ekugadzirisa ese kunyoreswa kweApp Store muIOS 12.2 | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa ese maApp Store kunyoreswa muIOS 12.2
iOS inoenderera mberi nekufambira mberi zvishoma nezvishoma ichitibvumidza kuti tiite zvimwe zvinhu nekuwedzera, uye pamusoro pezvose, izvo zvinhu izvo zvinotitendera kuti zviitwe zvishoma nyore kupfuura pakutanga. Mune ino kesi tinokuunzira iwo makuru ekudzidzisa eIOS 12.2 Naiyo yaunogona kushandisa zvakanyanya yako iPhone kana iPad, sekugara mu iPhone News.
Tinokuratidza maitiro aunogona kubata kunyoreswa kweese maapplication ako nekukurumidza kubva kuApp Store, Usatambisa chero imwe nguva uye uwane maitiro ekuchengeta kutonga kweese ako ekushandisa zvakanyanya sezvinobvira. Izvo zvitsva zveIOS 12.2 zviri kuuya kwatiri nekuwedzera simba uye kuwedzera kwekuvandudza kwevashandisi.
Pasina kumwe kunonoka isu tave kuzokuratidza maitiro ekushandisa ese aya kunyoreswa zvese mumasisitimu anoshanda ayo achiri kushanda uye mune ayo anouya, nekuti isu tinoziva kuti havazi vese vashandisi vane yazvino vhezheni yes mobile operating system iyo iyo Cupertino kambani inopa vashandisi vayo uye hatidi kuti iwe usiyiwe kubva pane chero mukana weichi chikonzero chega, saka sarudza bhuku rinokodzera zvakanyanya zvaunoda mukati medu zvatinokupa iwe pane ino chiitiko muActualidad iPhone.
1 Maitiro ekugadzirisa kunyorera kubva kuIOS 12.2 zvichienda mberi
2 Maitiro ekugadzirisa kunyorera kubva kuIOS 12.1.4 kana pakutanga
3 Wona, chinja, kana kukanzura kunyoreswa
Maitiro ekugadzirisa kunyorera kubva kuIOS 12.2 zvichienda mberi
Sezvo imwe yazvino mabetas eIOS 12.2 chiito ichi chakaitwa chakareruka, kune izvi isu tinongofanirwa kuita matanho anotevera:
Vhura iyo App Store application kubva kune yako iPhone kana iPad senguva dzose
Dzvanya pane diki icon inomiririra chimiro chako chemufananidzo chakapihwa muICloud uye icho chiri muchikamu chepamusoro kurudyi chemba chidzitiro cheiyo iOS App Store
Bhura pasi pasi kuchikamu "Manage subscriptions" uye sarudza nekubata kamwe chete
Ndiko nyore kwazvo isu tichizokwenenzvera kuwana zvese kunyoreswa kwatinonyorerwa kamwechete sitiroko uye nekuzvibata ivo zvakananga kubva mukati. Iye zvino tave kuzongofanirwa kusarudza kunyorera kwatinoda kugadzirisa uye wotanga kushanda nayo, asi isu tichaisiya izvo kune chikamu mitsara mishoma pazasi.
Mukufunga vamwe vashandisi vanogona kuona iyi sarudzo zvakare kubva kuIOS 12.1.4, asi sevha haina iyo yakamisikidzwa kana zvinoita sekunge izere nekutumirwa nekambani yeCupertino, saka parizvino iyi ndiyo nzira yepamutemo yekubata kunyoreswa muIOS 12.2 asi kwete mune dzimwe shanduro dzeIOS.
Maitiro ekugadzirisa kunyorera kubva kuIOS 12.1.4 kana pakutanga
Nekudaro, iyi nzira iri nyore kwazvo yatinayo muIOS 12.2 haina kugara iripo, nguva ino kana tiri kushandisa iOS 12.1.4 kana vhezheni yekutanga yeiyo inoshanda system yekambani yeCupertino isu tichafanira kutevedzera nhanho isu siya iwe. pazasi kuti utarise kamwe kamwe kunyorera kwedu kwese:
Vhura iyo yekushandisa application kubva kune yako iPhone kana iPad
Enda kuchikamu iCloud account yesarudzo dzekutanga dzakapihwa kwatiri mune irondedzero
Famba chikamu nhoroondo yekusimbisa kuitira kuti uone mamwe ese anoshanda
Iye zvino tava kuzosarudza sarudzo tarisa Apple ID mauri muchawana chimwe chikamu chinonzi kunyoreswa uye izvo zvakaenzana nechikamu chakapfuura uye kuti chiri mukuenderana nguva dzose kuburikidza neakaundi yedu iCloud
Uye ikozvino zvakare izvozvi zvese sarudzo tinopihwa kwatiri kuti isu ticha sarudza imwe neumwe zvinoenderana nezvatinoda kuchengetedza kudzora pamashandisiro atinoita pamhando idzi dzezvinhu mukati meApp Store.
Wona, chinja, kana kukanzura kunyoreswa
Kana tangosvika panhare yekunyorera, isu tinenge tichiratidzwa muzvikomberedzo kuti kangani kunzi kunyoreswa kunovandudzwa uye pazasi pereferenzi na "Kuvandudzwa pa xx / xx / xxxx" nazvo zvatiri kujekesa kuti chiito ichi chichaitwa riini. Asi zvakakosha kuti tizive kuti isu tichazokwanisa zvakare kubata aya ambotaurwa ekunyorera zvakananga kubva muchikamu chatakakuratidza kuti usvike nguva pfupi yapfuura, izvi ndizvo chete zvauchakwanisa kuita kana iwe uchinge wawana kunyorera manejimendi.
Tinogona chinja mhando kunyorera: Kana isu tine dzakasiyana sarudzo isu tinokwanisa kushandura marongedzero nekungotarisa, senge Apple Music
Tinogona cancel iko kunyorera: Kune izvi isu tinosarudza iyo sarudzo kubvisa kunyorera iyo inowanikwa pazasi uye ine ruvara rutsvuku. Kana tangosarudza sarudzo yekudzima kunyoreswa, tichazobvunzwa kuti tione kuti tinonyatsoda kuzviita uye isu tichaenderera nechikumbiro chedu.
Iko kunyorera kunoramba kuchishanda kunyangwe tikakanzura kusvika nguva yekukumbira yekukumbira yapera, uye ndozvazviri nyore sei kubva kuActualidad iPhone isu tinoda kukudzidzisa iwe maneja ese ako ekunyorera kune mafomu anowanikwa muApple App. Tinovimba zvave zvichikubatsira uye usakanganwa kusiya zvaunotaura kana uine mibvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa ese maApp Store kunyoreswa muIOS 12.2
Hi: Ndinofanira kuva nerombo rakanaka nekuti neIOS 12.1.4 ndinogona kuzviita sezvaungaita neIOS 12.2.
Iwo matema AirPods anga atove akagadzirira kutanga muchirimo
Maitiro ekumisikidza kana kudzima runhare rwechimbichimbi paApple Watch